दिनमा दशहजार पाइला हिद्नुस स्वस्थ रहनुस::देश र जनताप्रति समर्पित
दिनमा दशहजार पाइला हिद्नुस स्वस्थ रहनुस
पोखरा- बीबीसी / पछिल्लो समय स्मार्ट फोन र स्मार्ट घडी लगायत विभिन्न उपकरण मार्फत दैनिक कति कदम हिँडिन्छ भन्ने डाटा राख्ने चलन बढेको छ । यसमा प्रायः सबै डिभाइसले हामीलाई दैनिक दश हजार पाइला हिँड्ने लक्ष्य दिएको हुन्छ तर हामीले एकदम थोरैपटक मात्र सो लक्ष्य हासिल गर्न सकिरहेका हुन्छौँ जसले धेरैलाई निराश र स्वास्थ्यको विषयमा चिन्तित बनाइरहेको छ । के वास्तवमै दश हजार पाइला राम्रो स्वास्थ्यका लागि अतिआवश्यक कुरा हो ?
यसमा पहिलो कुरा त डिभाइसले हामीले चालेको कदम सधैँ उचित नै नाप्छ भन्नेमा विवाद रहँदै आएको छ किनकी असली शारीरिक व्यायाम सजिलै मापन गर्न सकिँदैन । त्यसैले हामीले शारीरिक सक्रियता कायम राख्दा यसैको डाटामा मात्र निर्भर रहनुपर्छ भन्ने छैन । यसअघिका विभिन्न अनुसन्धानले दिर्गकालीन रुपमा स्वस्थ रहन दैनिक ८ हजारदेखि १२ हजार पाइला हिँड्नुपर्ने दाबी त गरेका छन् तर आजसम्म ती मध्ये कुनै अध्ययन ठूलो स्तरमा सञ्चालन भएका छैनन् भने पर्याप्त प्रमाण पनि प्राप्त गर्न सकिएको छैन ।वास्तवमा १० हजार पाइलाको चर्चा पहिलोपटक १९६४ मा टोकियो ओलम्पिक्स गेमको समयमा सुरु भएको थियो जसबेला एउटा कम्पनीले ‘पेडोमिटर’ लाई ‘मान्पो–केइ’ भन्दै विक्री गरेको थियो जसमा ‘मान’ को अर्थ १० हजार हो भने ‘पो’ भनेको पाइला हो । यसरी सो कम्पनीको व्यापार त्यस समय अत्यन्तै सफल रह्यो जसपछि नै सबैको दिमागमा पाइला भन्नासाथ १० हजार भन्ने छाप पर्दै गएको बताइएको छ । अहिलेका अनुसन्धानहरुमा चाहिँ १० हजार पाइलाको हिँडाइलाई र केबल पाँच हजार पाइला हिँड्दाका फाइदासँग तुलना गरिएको छ जसमा धेरै हिँड्नु अवश्य पनि राम्रो भएको पाइएको हो । तर यसमा निश्चित यति कदम नै हिँड्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन ।
जस्तै हार्भड मेडिकल स्कुलको एक अनुसन्धान टोलीले ७० को उमेरका १६ हजार माहिलाहरुमाथि चार वर्ष अध्ययन गरेको हो जसमा तिनको दैनिकको हिँडाइ मापन गरिएको थियो । यसबीच ५०४ जनाको मृत्यु भयो । उनीहरुले कति पाइला हिँडेका थिए होलान् त ? यसरी अनुसन्धानमा दैनिक २७,०० पाइला हिँड्ने भन्दा चार हजार कदम हिँड्नेहरु लामो समय बाँच्ने गरेको र थोरै अन्तरले पनि जीवन आयुमा ठूलो फरक पार्न सक्ने पत्ता लागेको हो । तर धेरै हिँड्नुपर्छ भन्दैमा त्यसले चामत्कारिक फाइदा भने गराउन सक्दैन । जस्तै दिनमा ७ हजार कदम हिँड्नु स्वास्थ्यका लागि लाभकारी हुन्छ तर त्यो भन्दा बढी हिँड्नुले हाम्रो औसत आयुमा कुनै प्रभाव नपार्ने बताइएको छ । यस्तोमा अध्ययनले ७,५०० पाइलासम्मको हिँडाइ पर्याप्त हुने निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसैले १० हजार कदमका कुनै विशेष फाइदा नरहेको स्पष्ट भएको हो ।